Huawei weghaara 20% ahia ahia na Europe | Gam akporosis
Huawei na-ere otu n'ime smartphones ise na Europe
Huawei amalitela afọ na ụkwụ aka nri. Onye na-emepụta China nwere ezigbo ahịa na nkeji iri na ise nke afọ, ịbụ akara nke toro ọtụtụ ọ na-abịarukwa nso Samsung na ndepụta a. Na mgbakwunye, na ihe ijuanya nke ọtụtụ, na-na nke nke mbadamba na gam akporo na ya nwere ezi mmalite nke afọ, ịbụ ndị kachasị ere na nkeji iri na ise nke afọ a.
Ugbu a, anyị nwere data gbasara ire ekwentị na ọkwa European. Figuresfọdụ ọnụ ọgụgụ nke Huawei laghachiri inwe nsonaazụ ọma, ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ bụ ọrụ maka ya ere otu n'ime ekwentị ise na Europe. Ya mere, ọnụnọ ya dị ukwuu karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Ahịa ekwentị nọ na-ada ada kemgbe afọ ole na ole, ihe ọtụtụ ụdị dị na ahịa na-ata ahụhụ. Ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ndị na-akwado ọnọdụ a nke ọma, ọkachasị n'ihi na ha na-enweta mmụba dị ukwuu na ahịa ha n'ahịa mba ụwa. Nke a bụ ihe gbasara Huawei, Xiaomi na Honor. Nke mbu nwetara uzo ahia nke 19,9%, na uto nke ihe ruru isi anọ ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga. Na-ebugharị site na ire ere na mba Europe dịka Spain, UK, Italy, France na Germany.
Xiaomi amalitela nke ọma na 2019 a n'ahịa Europe. Chinesedị ndị China na-arị elu pasent 4 na ahịa ya, nke mere na ha enweelarị ahịa ahịa nke 8,6%. Nke a bụ ịrị elu dị mkpa maka ika ahụ, nke na-ahụ ọnụnọ ya na-aba ụba, ọkachasị ahịa dịka Spain na Italytali na-akwalite ahịa ya. Sọpụrụ ka toro, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, ka ha kwụrụ na 4,5%.
Ihe na-akpali mmasị n'ihe banyere Europe bụ na e nwere ụfọdụ ahịa ndị isi, nke na-enyere ụdị dị ka Huawei aka ịrekwuo. Nke a bụ ihe gbasara Spain na France, ebe ahia nke ụdị ndị a abawanyela. Nke na-enyere ha aka ịchịkwa ahịa ahụ. Agbanyeghị, akụkọ ahụ na-ekwukwa na mmata izugbe nke ụdị ndị China belatara nke ukwuu. Nke a na - eme ka ụdị akara wulite ma nwee ọnụnọ na ahịa ndị ahụ.
Obi abụọ adịghị ya, ndị a bụ data nke nnukwu mmasị, nke mere ka o doo anya nnukwu ọganihu ndị China na-eme na Europe. O nwere ike ịbụ na Huawei kacha baara uru. Na mgbakwunye na ịchịkwa ahịa ndị ChinaỌ bụkwa akara ndị China kachasị ere na mpụga obodo ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei na-ere otu n'ime smartphones ise na Europe
Google Keep ugbua nwere ọnọdụ gbara ọchịchịrị
OnePlus 7 Pro bụ ihe ịga nke ọma na ndoputa